3 युरोपेली शहर सर्वश्रेष्ठ ट्रेन द्वारा भ्रमण | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >3युरोपेली शहर सर्वश्रेष्ठ ट्रेन द्वारा भ्रमण
पढ्ने समय:3मिनेट(Last Updated On: 28/08/2020)
त्यहाँ धेरै छन् युरोप सुन्दर शहर, र के थप छ, यो ती सबै भ्रमण गर्न त सजिलो छ. रेल द्वारा यात्रा यी बाल्टिन-सूची हेर्न ठूलो तरिका हो गन्तव्यहरू. यहाँ छन्3युरोपेली शहर सर्वश्रेष्ठ रेल द्वारा भ्रमण.
हामी हाम्रो युरोपेली शहर भन्दा राम्रो सम्पदा संग रेल द्वारा भ्रमण सुरु: प्रयोग, बेल्जियम
त्यहाँ भन्दा बेल्जियम थप छ बस चकलेट. ब्रुग्स एक नहर शहर हुनुको लागि प्रसिद्ध छ, जस्तै भेनिस र एम्स्टर्डम. वास्तबमा, सम्पूर्ण शहर एक यूनेस्को विश्व सम्पदा साइट. रेल द्वारा ब्रुग्स गएर एक महान विचार देखि छ ब्रुग्स मुख्य रेलवे स्टेशन छ केवल एक 10 मिनेट सबै प्रमुख देखि हिंड्न किनमेल सडकमा र 20 बजार वर्ग मिनेट. यो पनि अन्य सबै प्रमुख शहर गाडिहरु प्रदान बेल्जियम, साथै रूपमा सानो, फ्रान्स, र Thalys ट्रेन पेरिस–ब्रसेल्स-Ostend.
त्यसैले तपाईंको रेल टिकट बुक र सुन्दर साइटहरु आनन्द प्रयोग. मायो रमाइलो गर्न निश्चित हुनुहोस् फ्राइज र एक स्थानीय बियर.
को घाम लागि: ओस्लो, स्पेन
तपाईं कसरी घाम र युरोपेली शहर सर्वश्रेष्ठ रेल द्वारा भ्रमण महसुस गर्छन्? भव्य Andalucian के परिदृश्य र Moorish वास्तुकला? राम्रो लाग्दछ? त्यसपछि ओस्लो लागि छ.
सबैभन्दा यात्री एक विचार स्पेन गर्न रेल यात्रा बार्सिलोना वा मैड्रिड विचार, तर वास्तविक jewel थप दक्षिण निहित, स्पेन गरेको चौथो-सबै भन्दा ठूलो शहर मा.
ओस्लो गरेको सान्ता Justa रेल स्टेशन एक भाग हो उच्च गति, पाँच-लाइन लोकल सेवा र जडान 17 प्रमुख स्पेनिश शहर, त्यसैले त्यहाँ रेल द्वारा भन्दा यात्रा गर्न कुनै राम्रो तरिका हो.
जब तपाईं जानुहोस्, तपाईं सास-लिने गिर्जाघर भ्रमण निश्चित र तपस भ्रमण मा जाने – तिमी सक्छौ book with an organized group.
युरोपेली शहर सर्वश्रेष्ठ रेल द्वारा भ्रमण पर्यटन को लागि: म्यूनिख, जर्मनी
म्यूनिख को Nymphenburg जस्तै बीएमडब्ल्यू मुख्यालय र Allianz एरिना र ऐतिहासिक साइटहरु जस्तै नयाँ स्थलहरू एक सुन्दर मिश्रण छ दरबार and the Munich Hofgarten and that is why we have put her on our European cities best visited by train.
भ्रमण गर्दा रेल द्वारा जर्मनी, तपाईं भेनिस मा हप गर्न सक्नुहुन्छ, भियना मार्फत यात्रा, पोर्टो, र नाइस, र – बस सात घण्टा पछि – मा हुन म्यूनिख. को रेलवे साथ विचार मनोरम छन्. भव्य इटालेली गाउँहरू को लागी बाटो बनाउनुहोस् आल्प्स त्यसपछि Dolomites म्यूनिख आइपुगेपछि अघि.
जब तपाईं जानुहोस्, बनाउन केही प्रयास गर्न निश्चित ‘Munchner Weiswurst', ससेज ताजा सुखा pretzels र मीठो तोरी संग सेवा. को famed Bavarian बियर संग यसलाई तल धुन.
म्यूनिख गाडिहरु गर्न फ्रैंकफर्ट
भियना म्यूनिख गाडिहरु गर्न
म्यूनिख गाडिहरु गर्न श्टुटगार्ट
तपाईंले यी भव्य युरोपेली शहर को एक भ्रमण गर्न प्रेरित गर्दै? युरोपेली शहर सर्वश्रेष्ठ रेल द्वारा भ्रमण मा सबै भन्दा राम्रो रेल टिकट मूल्यहरु मा बुक गर्न सकिन्छ Saveatrain.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F3-european-cities-best-visited-by-train%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
रेल यात्रा यात्रा ट्राभेलबिजियम travelfrance travelspain
किन ट्रेन यात्रा जर्मनीमा अद्भुत छ
6 ट्रेन युरोप यात्रा गर्दा Thrifty सुझाव